Ukujongana naBathengi abaNzima kunye neMeko kwiLizwe eliSandulela ngubhubhani
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Safety » Ukujongana naBathengi abaNzima kunye neMeko kwiLizwe eliSandulela ngubhubhani
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • iindaba • Ukwakha kwakhona • Safety • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo • Iindaba ezahlukeneyo
UGqirha Peter Tarlow uxoxa ngabasebenzi abathembekileyo
Ngokwesiko kuninzi lwenyakatho ye-hemisphere inyanga kaSeptemba ibizwa ngokuba "ziintsuku zeenja" zehlobo. Igama livela kwinto yokuba kuhlala kushushu kakhulu nokuba inja ifuna ukubhadula ezitratweni. Kwiminyaka edlulileyo, uSeptemba yayilixesha apho abantu babebuya ekhefini, kwavulwa izikolo, kwaye ishishini labuyela kwinkqubo yesiqhelo. Ukuphela kwehlobo kwakukwindawo ephezulu yabakhenkethi kwihlabathi liphela. Ixesha lotshintsho phakathi kwehlobo nasekwindla lalibonakala ngathi lixesha leenqwelo moya zonke kunye neehotele kunye nexesha apho abahambi babenemithambo-luvo ephazamisayo. Le nkcazo yayi "ngoko" kodwa i-2020 kunye ne-COVID-19 ubhubhane ibone ukuzalwa kwehlabathi elitsha lokuhamba. Ngoku siphila kwixesha apho izinto zihlala zingaphaya kolawulo lobungcali kubakhenkethi. Akukho mntu waziyo ukuba unyango lwenene okanye iyeza lokulwa ne-COVID-19 liyakwenzeka nini, ukuba ziya kukhuseleka njani na ezi nkqubo zonyango zintsha okanye indlela uluntu oluhambahambayo oluya kusabela ngayo. Kukwanjalo ke kuyo yonke into ukusukela ngokuya esikolweni ukuya kwimidlalo. Ukongeza ukungaqiniseki kuninzi lwehlabathi ngoSeptemba kuthetha imingeni enxulumene nemozulu ejika ibe kukulibaziseka kohambo. Iziphumo ezongezelekayo zazo zonke ezi zinto zingathandabuzekiyo zinokubangela, kwabo bahambayo, nakwezona meko zinzima kunye nomsindo wokuhamba.
NgeyoMsintsi emva koko, yinyanga elungileyo yokujonga into eyadlulayo ebacaphukisile abathengi bethu, yintoni ebangele ukuba ubushushu buvuthe, kunye nendlela ekufuneka sigcine ngayo ulawulo kwiimeko ezingalawulekiyo, ezinje ngokulibaziseka okunxulumene nemozulu. Ngokujonga le migaqo-nkqubo, silungiselela ishishini ukuba lifunde kwizinto zalo zangaphambili kwaye silungiselele izimvo ezintsha kunye nezinto ezintsha ezinethemba lokubuyela "kwindlela yokuhamba yesiqhelo" kwihlabathi elisemva kobhubhane. Ngomzi mveliso wezokhenketho kwihlabathi liphela zikwimeko yokunqumama okanye ukunqumama kancinci, eli lixesha elifanelekileyo lokuthatha ithuba lokuvavanya izakhono zethu zokuguqula iimeko ezinzima zibe yimpumelelo kunye nokufunda ukunciphisa umsindo nokwandisa imveliso kunye nomthengi. ukwaneliseka. Ukukunceda usinde kweli xesha linzima kukhenketho, cinga ngoku kulandelayo:
-Khumbula ukuba, kwilizwe lezokhenketho, kuhlala kukho ukubakho kwengxabano kunye nokungoneliseki kwabathengi. Nokuba wenza ntoni, okanye kwenzeka ntoni, kuyakuhlala kukho abo bafuna ngaphezulu okanye abangonelisekanga yile nto uyenzayo. Ngenxa yokongezwa kokhuseleko kunye nemilinganiselo yezempilo sinokucinga ukuba abahambi baya kuhlawula kakhulu kuhambo lwabo kwaye bafuna ukuziva belawulwa, nkqu nakwiimeko apho ukudana kwezentlalo kube ngumgaqo. Phuhlisa iimeko apho umthengi enoluvo oluthile lolawulo nokuba lincinci kangakanani. Umzekelo, endaweni yokuthi nje into ayinakwenziwa / yenziwe, zama ukubiza impendulo njengenye indlela enokubakho. Xa unika ezinye iindlela, qiniseka ukuba abasebenzi abaphambili bahlala bephaphile kwaye babonisa umonde. Rhoqo, ingxaki yezokhenketho ingashenxiswa hayi ngokusombulula yonke ingxaki, kodwa ngokuvumela umthengi ukuba azive ukuba uphumelele ubuncinci uloyiso.
-Yazi ukusikelwa umda kwakho ngokwasemthethweni, ngokweemvakalelo nangobuchule. Zininzi izizathu zokuba abantu bahambe, abanye ukonwaba, abanye kushishino, kwaye abanye banesikhundla ekuhlaleni. Kwabo bakweli qela lokugqibela, kubalulekile ukuba iingcali zokhenketho ziqonde amandla "okuma kwezentlalo". Abantu abahambayo banokuba neentloni kunye noloyiko kwaye abafuni nje ukuva izizathu. Abahambi banokukhawuleza ukuba nomsindo kwaye bacothe ukuxolela. Xa ujongene nabaxhasi bakho kunye nabathengi, kuqala yazi ukuba yintoni ekucaphukisayo kwaye xa ufikelele kwimida yakho. Musa ukuzisa iingxaki zakho emsebenzini kwaye khumbula ukuba ukuhamba kwilizwe lasemva kobhubhane kuthathwa ngabaninzi njengobungozi kwaye kungoyiki. Yiba sisilumko ngokwaneleyo ukuba uqaphele ukuba ungabasebenzi bakho okanye ufikelele kwimida yovakalelo, ukuba ingxaki iyaqhubeka kwaye ufuna uncedo.
-Zilawule ngokwakho. Ukhenketho lushishino olucela umngeni kwimvakalelo yokuzixabisa. Uluntu lunokubanga kwaye ngamanye amaxesha lungalunganga. Rhoqo, kwenzeka iziganeko ezingaphaya kolawulo lwethu. Kula maxesha apho kubalulekile ukulawula uloyiko lwangaphakathi kunye neemvakalelo. Ukuba amagama akho abonisa uluvo olunye kwaye ulwimi lomzimba wakho luchaza enye, kungekudala uza kuphulukana nentembeko.
-Ukhenketho lufuna iingcinga ezininzi. Ezokhenketho zifuna ukuba sifunde indlela yokujongana neemfuno neemfuno zethu ngexesha elinye. Kubalulekile ukuba iingcali zokhenketho ziqeqeshe kubugcisa bokuphatha ulwazi, ulawulo lomnyhadala, kunye nabantu abajamelana nobuntu. Ngamaxesha anzima, abantu abaphambili kufuneka babe nakho ukwenza zonke izakhono ngexesha elinye.
Amaziko okhenketho aphumeleleyo ahambisa oko akuthembisayo. Akukho nto imbi ngaphezu kokuthembisa nokunganikezeli. Kwilizwe le-COVID-19 ethembisayo inokutshabalalisa ukhenketho okanye ishishini lokuhamba. Ngokwesiko la mashishini asokola kwintengiso engaphezulu kunye nezithembiso ezingaphezulu kokuba zinokuhambisa. Ungaze uthengise imveliso ekubonelelwa ngayo luluntu lwakho / umtsalane. Imveliso yokhenketho ezinzileyo iqala ngentengiso ethembekileyo. Ngendlela efanayo ungaze uthembise ukhuseleko kwezempilo. Cacisa malunga nokuba zeziphi iindlela zokukhusela ozithathayo kwaye uthetha ntoni ngemigaqo oyisebenzisayo.
-Iinkokeli zokhenketho eziyimpumelelo ziyalazi ixesha lokuhoya iimvakalelo zazo. Ithuku zihlala ziluncedo olukhulu, ngakumbi ngexesha lobunzima. Kuxhomekeke kuphela kumathuku, nangona kunjalo, kunokukhokelela kwingxaki. Hlanganisa ulwazi lwendalo kunye nedatha enzima. Ke ngaphambi kokuba uthathe isigqibo, cwangcisa zombini iiseti zomhla ngendlela efanelekileyo. Ithuku lethu linokubonelela ngala maxesha anqabileyo wobukrelekrele, kodwa kwiimeko ezininzi sebenzisa izigqibo zakho kwisiseko sedatha enzima kunye nophando olulungileyo kunye nemvelo.
-Amashishini okhenketho aphumeleleyo asebenza nasekulungiseni imeko enzima kunokuba ayilawule. Iingcali zezokhenketho kudala ziqonda ukuba ukungqubana kuhlala kuyimeko yokuphulukana nelahleko. Impumelelo yokwenene iza ngokwazi indlela yokuphepha ukungqubana. Ngexesha lomsindo, lungela ukucinga ngeenyawo zakho. Enye indlela yokufunda ubugcisa bokucinga ezinyaweni zakho kukuphuhlisa imeko yongquzulwano kunye noqeqesho lwabo. Okona baqeqeshwe ngcono ukhenketho lwethu kunye nabasebenzi abaphambili, kokukhona baya kuba ngcono kulawulo lwentlekele kwaye bathathe izigqibo ezifanelekileyo. Kwilizwe le-post-COVID cacisa ukuba yintoni onokuyenza kwaye ungenako ukuyenzela abathengi bakho kwaye uhlale unyanisekile.
-Yazi imeko yeshishini etshintsha-tshintsha kwaye uyazi indlela yokufumana amathuba kumaxesha anzima okanye angazinzanga. Ukuba uzifumana ungqubano, qiniseka ukuba uyiphethe ngaphandle kokutyumza umthengi wakho. Umceli mngeni kumhlaseli wakho ngendlela evumela umthengi okhathazekileyo ukuba abone impazamo yakhe ngaphandle kokulahla ubuso. Khumbula ukuba ingxaki iqulethwe yingozi kunye nethuba. Funa ithuba kuyo yonke ingxaki yeshishini lokhenketho.
-Zama ukwenza icandelo labathengi kwiqela lakho. Akukho mntu unokubonelela ngendawo ekhuselekileyo ngaphandle kwentsebenziswano yomniki-nkonzo nokhenketho kunye nabathengi. Xa uzama ukoyisa umthengi onomsindo, qiniseka ukugcina unxibelelwano oluqinisekileyo lokujonga kwaye ube nethemba kumagama owasebenzisayo nakwithoni yokuthetha esetyenzisiweyo. Vumela umthengi avele kuqala kwaye athethe kuphela emva kokuba inqanaba lokungena likugqityiwe. Ukuvumela umthengi ukuba akhuphe umoya, nokuba amazwi akhe angangamkelekanga kangakanani, yindlela elungileyo yokubonisa ukuba uyamhlonipha nokuba awuvumelani noko. Yenza izisombululo ezonelisayo macala kwaye zenze umthengi abe yinxalenye yesisombululo.
-Khumbula ukuba ufuna umthengi ngaphezu kokuba ekufuna. Nokuba ayifanelekanga, ukhenketho lushishino oluqhutywa ngabathengi. Ezokhenketho azikho malunga nokulingana, kunoko zimalunga nenkonzo nokwenzela abanye. Ezokhenketho ngokwendalo zinolawulo oluphezulu kwaye ezo arhente zithathela ingqalelo ulawulo lwentlalontle zihlala ziphumelela kakhulu.
-Buza iingcebiso. Kuninzi okuza kufuneka kuguquke kwihlabathi apho abantu sele beqhele ukungahambi, kwaye uninzi luye lwaguqula indlela abenza ngayo ishishini. Funa izimvo kunye neengcebiso kubathengi kwaye ujike ishishini lakho libe ngumzamo weqela. Ezokhenketho nohambo khange zikhuseleke nge-100% kodwa xa sisonke singasebenzisana ukuyenza ikhuseleke kwaye senze 'ukhenketho olukhuselekileyo ".
Umbhali, uGqirha Peter Tarlow, ukhokela Ukhuseleko loKhenketho inkqubo yiNkampani ye-eTN. UGqr Tarlow usebenze ngaphezulu kweminyaka engama-2 neehotele, iidolophu ezijolise kukhenketho kunye namazwe, kunye namagosa okhuseleko oluntu nolwabucala kunye namapolisa kwicandelo lokhuseleko lokhenketho. UGqirha Tarlow yingcali eyaziwayo kwihlabathi kwicandelo lokhuseleko nokhuselo lokhenketho. Ngolwazi oluthe kratya, ndwendwela ukhuseleko.com.